Falanqeyn ku saabsan aftida ka dhaceysa Rwanda - BBC Somali
Falanqeyn ku saabsan aftida ka dhaceysa Rwanda
Golaha wasiirada ee dalka Rwanda ayaa ogolaaday in dalkaasi laga qabto afti dadweyne oo dadku ay ugu codaynayaan inay ogolyihiin iyo in kale kordhinta muddada uu xilka haynayo madaxweynaha dalka.
Aftida ayaa la qaadi doonaa 18-ka bishan December. Hadii aftida loo codeeyo inaan la xadidin mudada xilka madaxweynenimada waxay markaasi fursad u tahay Madaxweyne Paul Kagame inuu isu soo sharaxo xilka mar saddexaad.
Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa cambaareeyay aftida oo sheegay in ay arrintan ay wax u dhimi karto hannaanka dimuqraadiyada dalkaasi.
Haddaba arrintani maxay ka dhigantahay? Ma laga yaabaa in uu muran ka yimaado sidii ka dhacday dalka deriska la ah ee Burundi? Arrimahasi waxaan ka waraysnay Dr Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Afrika. Raage Xassan ayuu u warramay.